Nnwom 17 NA-TWI - Ɔtreneeni mpaebɔ - O Awurade, tie me - Bible Gateway
Nnwom 16Nnwom 18
Nnwom 17 Nkwa Asem (NA-TWI)
17 O Awurade, tie me sufrɛ na bu atɛn; tie me su na boa me! Tie me mpaebɔ a efi adwene pa mu no. 2 Wubebu me bem efisɛ, wunim ade trenee. 3 Wunim me koma mu. Woaba me nkyɛn anadwo; woahwehwɛ me mu nyinaa na woahu sɛ bɔnepɛ biara nni me mu. 4 Menka bɔne sɛnea afoforo yɛ no. Madi wo mmara so na mapae afi basabasayɛ kwan so. 5 Menam wo kwan so daa, na mentoo kwan.